Ahoana ny fanaovana sary 3D litera: inona izy ireo, inona no ilana azy ary ahoana ny fanaovana azy Famoronana an-tserasera
Ny litera 3D, antsoina koa hoe litera telo-habe, dia fitakiana dokam-barotra manaitra amin'ny fampiasana maro, na lohateny, fonony sns. Izany no antony ahafahan'ny fianarana manoritra litera amin'ny 3D afaka manokatra tontolo be maso kokoa ho anao, zavatra iray izay manandanja tokoa ankehitriny.
fa, Inona no antsoina manokana hoe litera 3D? Ahoana ny fomba fanaovana sary litera amin'ny 3D? Amin'ny solosaina ihany ve no ahafahana manao azy ireo? Hiresaka aminao momba izany rehetra izany sy ny maro hafa eto ambany izahay.
1 Inona avy ireo litera 3D
2 Ahoana ny fanaovana sary 3D litera
2.1 Manaova sary tanana 3D
2.2 Manaova litera telo refy amin'ny solosaina
2.2.1 Fandaharam-potoana hanaovana sary litera amin'ny refy 3
2.2.1.1 Adobe Photoshop (na GIMP)
2.2.2 Mpamokatra taratasy 3D
2.2.2.2 Font Meme
Inona avy ireo litera 3D
Alohan'ny hahalalanao ny fomba hanoratanao litera 3D dia tokony ho fantatrao izay tianay horesahina amin'ity karazana typografika ity. Ireo dia litera manana "vatana", izany hoe toy ny zavatra tena izy, misy ny halaliny, ny haavony, ny sakany ... Raha atao teny hafa, izy ireo dia litera izay nomena ny fisehoan'ny miraikitra amin'ny taratasy, fa mihoatra ny tsipika izy ireo.
Mazava ho azy fa mba hahatratrarana an'io vokatra io dia tsy maintsy milalao miaraka amin'ny aloka, loko ary koa amin'ny endriny ianao, satria misy endritsoratra tsy mamela ny 3D, fa ny hafa kosa mialoha kokoa ireo.
Taratasy telo refy no ampiasaina hafatra fohy, teny, na vondrona misy azy ireo izay te hisongadina na hisarika ny sain'ny mpijery. Na izany aza, tsy "novel" izy ireo. Raha ny marina dia efa am-polony taona maro izy ireo tamin'ny androntsika isan'andro. Raha ny marina dia azo antoka fa mahita izany vokatra izany amin'ny afisy sarimihetsika taloha ianao. Ankehitriny, marina fa, ankehitriny, manana fahafaha-manao famolavolana bebe kokoa, dia nanao litera 3D dia azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa sy amin'ny fampiasana izay tsy noeritreretina taloha.
Amin'ny Internet dia afaka mahita litera 3D maimaim-poana ianao, toy ny Bungee Shade, Semplicità Ombra, Xylitol Hollow ... Fa misy ihany koa ny mety hamoronana endritsoratra 3D ilainao amin'ny alàlan'ny mpamorona litera 3D (misy ny sasany maimaim-poana ary ny hafa kosa aloa) .
Azo antoka fa nanandrana nanintona litera tamin'ny 3D ianao indraindray. Raha ny marina dia tsy sarotra ny manamboatra azy ireo, indrindra amin'ny tanana. Fa raha tsy tadidinao ireo "tetika" nomen'ny programa sasany an'ny ankizy ireo, na mbola tsy vitanao mihitsy izany dia hanome anao fomba maro hanatanterahana izany izahay, manomboka amin'ny "manual" be indrindra ka hatramin'ny matihanina indrindra (mampiasa solosaina ).
Manaova sary tanana 3D
Hanombohana manao sary 3D litera tanana mila manomboka amin'ny fanaovana sary vitsivitsy ianao. Inona avy ireo litera sakana? Eny, miresaka typografia tsotra sy mazava isika. Ny tsara indrindra dia ny manomboka amin'ny litera lehibe ary, rehefa fantatrao ny teknika, mandrosoa mankany amin'ireo litera kely.
Zava-dehibe ny fiezahanao mampiasa tsipika mahitsy, saingy aza asongadinao loatra, satria mety hofafanao amin'ny farany. Tokony hamela toerana malalaka kokoa eo anelanelan'ny litera noho ny mahazatra ianao. Izany dia satria ilainao izy ireo "matavy", ary noho izany dia mila toerana malalaka izy ireo.
Vantany vao voatosinao izy ireo, tsy maintsy mamorona drafitra isaky ny litera ianao. Amin'izay ianao dia manomboka manamafy ireo litera. Mahereza, alao antoka fa mitovy daholo ny habeny mba tsy hiseho lehibe kokoa noho ny hafa ny sasany.
Ireo toe-javatra ireo, rehefa vonona azy ireo ianao, dia ilaina ny manasongadina azy ireo, satria hijanona ho raikitra ireo andalana ireo.
Raha vantany vao maina ny zava-drehetra dia azonao atao ny mamafa ny tsorakazo nomen'ilay borosy anao tany am-piandohana (rehefa nosoratanao ireo litera tamin'ny voalohany). Ny valiny dia hahazo font «chubby» bebe kokoa ianao, saingy mbola hijery 2D io. Ahoana no ahazoanao 3D? Tsara miaraka amin'ireto manaraka ireto.
Ny fampidirana ny endrika telo-habe dia tsy sarotra, fa tsy maintsy manapa-kevitra ianao raha hojerena ambony sy ambany ny litera, na avy eo ankavanana kavia. Satria izany rehetra izany dia hanova ny fahatsapana fa tsy maintsy omenao ny tsipika mivaingana mba hamoronana ny vokatra 3D.
Ohatra, raha tianao ho hita avy eo aloha izy ireo dia azonao atao ny manampy tsipika diagonal eo amin'ny zoron'ny litera tsirairay. Avy eo dia mila miditra amin'ny farany ianao. Hamorona litera miseho mipoitra avy ao anaty taratasy io.
Farany, tsy mila manampy aloka fotsiny amin'ireo litera (sy amin'ny taratasy) ianao mba hamoronana ilay fahatsapana fa eo ivelan'ny taratasy ireo litera ireo. Ny tetika iray dia ny fampiasana jiro fanovozana hahalalana ny fizoran'ny jiro tianao homena azy ary hahitana izay tokony hazavainao sy izay mety ho maizina. Ao amin'ny tononkira ny tenany dia tsy tratra izany, fa raha manao izany amin'ny zavatra iray ianao dia ho hitanao ny aloka sy jiro.
Manaova litera telo refy amin'ny solosaina
Raha hianatra ny fanaovana sary ny litera 3D amin'ny solosaina isika, dia manana fomba roa ahafahana manao izany: na amin'ny alàlan'ny programa fanovana, na amin'ny alàlan'ny mpamorona litera 3D.
Fandaharam-potoana hanaovana sary litera amin'ny refy 3
Raha ny marina, ny programa fanovana sary dia hamela anao hamorona litera 3D, noho izany dia tsy dia sarotra loatra. Na dia ny zavatra sarotra indrindra aza dia ny mahazo fampianarana hanaovanao azy arakaraka ny programa ampiasainao. Misy ny sasany izay mora hita, fa amin'ny hafa dia mety hanana fahasahiranana bebe kokoa ianao (satria tsy misy).
Amin'ny ankapobeny dia manome tolo-kevitra roa izahay:
Adobe Photoshop (na GIMP)
Hainao ve fa Adobe Photoshop sy GIMP dia tena mitovy amin'ny tsirairay, na dia amin'ny tranga faharoa aza dia somary sarotra kokoa ny mahatakatra azy. Na izany aza, ireto mpampanonta sary roa ireto dia tena hiasa tsara ho anao hahafantaranao ny fomba fanaovana sary ao anaty 3D.
Mazava ho azy fa zava-dehibe ny tanjaky ny solo-sainao satria handany loharano be dia be izany ary mety hanana olana ianao amin'ny fahatratrarana anao sy ny fahaverezan'ny fandrosoana rehetra vitanao. Ho fanampin'izay, tsy maintsy apetrakao ny kinova farany. Ny tsara indrindra dia ny manaraka fampianarana amin'ny voalohany mandra-pahatonganao ho azon'izay hatao, ary avy eo mandroso mba ampanjifaina araka ny itiavanao azy.
Na dia tsy programa fanovana sary aza i Word, ny marina dia manana izany litera telo refy amin'ny alàlan'ny WordArt. Ny zavatra tokana hataonao dia ny mankany amin'ny menio Insert / WordArt ary misafidy amin'ireo style 3D atolotray anao. Raha vantany vao manao izany ianao dia afaka mametraka ny lahatsoratra tianao. Ary raha tsy afa-po ianao dia afaka manova azy hatrany, ary koa ny habeny, ny karazany ary ny loko.
Mpamokatra taratasy 3D
Raha tsy te hampiasa programa ianao, na aleonao manao izay tianao atao haingana kokoa, dia io safidy io no mety ho tsara indrindra. Raha ny marina dia io no haingana indrindra satria manana safidy sy maodely maromaro ianao hisafidianana ny vokatra tadiavinao. Ohatra, ireto pejy sasany izay atolotray ireto dia ireto manaraka ireto:
Ity pejy ity dia manana sokajy samihafa miaraka amina karazana endritsoratra maro. Raha ny marina dia azonao atao apetraho ny lahatsoratra tianao, ary ny habeny. Raha vantany vao manana izany ianao dia tsy mila misintona ny valiny fotsiny.
Raha typiface no tadiavinao mitovy na mitovy amin'ny an'ny famokarana sarimihetsika lehibe, toy ny Star Wars, Avengers na Indiana Jones, eto no ahitanao azy ireo. Mazava ho azy fa manana taratasy efa voafaritra mialoha izy ireo, fa kosa azo amboarina amin'ny alàlan'ny vokatra chromatic.
Aorian'izay dia tsy mila misintona azy fotsiny ianao na mampiasa ny kaody HTML hampidirina azy amin'izay ilainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ahoana ny fanaovana sary 3D litera
Aiza no misintona endritsoratra maimaim-poana